Nyi Nyi Latt: Corel MotionStudio 3D 1.0 (latest version)
cbox မှာ တောင်းထားတာ တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. software ကိုတော့ ကျွန်တော် မတင်ပေးတော့ဘဲနဲ့ Direct link ကိုပဲ ချပေးလိုက်ပါတယ်. keygen ကိုတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်မပြေရင်ပြောပါ။ ကျွန်တော် တင်ပေးပါ့မယ်။ animation လုပ်တဲ့အထဲမှာတော့ ဒုတိယ အဆင့်လောက်ကို ရှိတယ်လို့ပြောရ မှာပဲ. တော်တော်လေး ကို ကောင်းပါတယ်. 3D လုပ်ဖို့အတွက်လဲ ပုံတွေအများကြီး ထည့်ပေးထား ပါတယ်။ အားလုံးကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ်။ အထဲမှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ keygen က corel motion studio အပြင် တစ်ခြား product တွေအတွက်ပါ ပါတယ်နော်။ တကယ်လို့ သုံးချင်သပဆိုရင် တစ်ခြား product တွေကိုပါ download လုပ်ပြီးတော့ သုံးလို့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။